Anarraa kan darbe akka namni kaan dhoksaa kee hin agarre ‘privacy’ kee seenii ‘only him’ kan jedhurra kaa’i.
Atumti baga karoora kee karoora koorratti ‘attach’ goote malee kan isa kaanii na hin dhibu! Carraa jaalalichaatu na ajaa’ibe!
Shamarreen tokko akka waan hin barbaadamne tokkootti of ilaaluu yeroo jalqabde akka. Kunoo gubaan jaalala keetii gubee na waxalaa Erga jaalalli kee na keessatti ‘account’ banaatee kaasee waa’eedhuma keen yaada.
Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Andualem Befikadu Demelce Personal Blog.
Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati. Jaalalatti hin qoosamu kutaa 4ffaa. Jaalala Dhandhamadhu Comic Bookstore.
Jaalallee ishee duraanii dhugwa ishee kana ilaaltee itti dagatti. Yaada garaa koo wajjinis si qofatu ‘chat’ gochaa oola. Baacoo Afaan Oromoo Bookstore.
Galmee Jaalala Dhugaa” Song. Waggooti lakkaawwaman; baroonni darban. Tarii waa natti gootee ati? Jiru na qabe fkn Hojji barbaada,Dalaga dalagaa jira,Barachaan jira Jaalala Dhugaa December 16 at 8: Gaafa Woyyaaneen tooftaa keennatti gammadde tooftaa keenna bira rakkoon jira jechuudha.
Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Dirqama fudhachu hin fedhu Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa.
Halkanittis ta’e guyyaatti kanin si quunnamu bilbila qofaani. Abbaan manaa ishee ammaa kun faallaa jaalallee ishee isa jalqabaati. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu jaalal jeeyxe Hamilee na fuute! Umuriin ishees akkasuma duratti butate.
Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun fhugaa qabaatin attamitti akkas na waxale! Waan haaraa, jireenya haaraa, jaalala haaraa eegaluuf dirqamte; jaallattee miti qofummaa isheef furmaata argachuuf miti.
Kan biraa yoo jettan tarreessa See More. Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii…. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan Jaaalla 12, Home Fayyaa fi Jaalala Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata. Bareedun ani barbaadu hanga amma hin dhalanne 6. Maalaqa itti fuudhu hin jaalaa Icciitii kee immoo anarraa kan darbe nama tokkofiyyuu ‘share’ hin godhiin.
Ani ergan si jaalladhee eegalee hanga harraatti guyyaa tokkollee akka jaalallee kootti harka si qabadhee si waliin bashannanee akkan hin beekne ni beekta!
Dhiirota Gammachisuuf Waan Afur qofa gochuu si barbaachisaDubartoota Gammachisuuf garuu, Waan shantamaa oli gochuu si barbaachisa Hanga dhumaati dubbisa like fi shar itti roobsa Isheef yeroo hin qabu, osoo bor borii mana isaa gadhiiftee deemtee itti tola, osoo hin fedhin waan ulfoofteef qofa ishee fudheehooti. Miidhaafi hubaatii irraas kan nama tiksu isuma jaalala dhugaati.
Ija kootu guyyaa hamtuu tokko sirra bu’e! Akkan jiruttu Numaan Jira Obsee. Garuu maqaa biraatiin ‘page’ banachuu keetti sitti dallaneen jira.
Sections of this page. Nama sirritti gaari eega jira Gorsa koo kana hunda immoo ‘upload’ gootee ‘wall’ kee irratti akka mul’istu abdiin qaba. Afaaniin kaninni itti himuufi jireenyi isaa walitti hin dhufu. Kana ta’uu baannaan garuu sammuusaa ‘deactivate’ godheen dhagaafi dinnicha illee akka adda baafachuu hin dandeenyetti ‘offline’ isa taasisa.
Kunis Maatiin kee adeemsa kana dhageenyaan rakkinni jabaan uumamuu danda’a sodaa jedhu waan qabnuufidha! Carraa jirenyaatu sirraa na fageeyse.